Mụ nwoke na Tomụaka! | Martech Zone
Mụ nwoke na Tomụaka!
Amachaghị m ihe m nwere ike ịnara! Internet Explorer 7, FIrefox 2 na MacBook Pro niile n’otu izu. M na azụ m RSS faili ntanetịime site na narị ole na ole posts, n'azụ na m email site banyere 200 ozi ịntanetị… na m nwere ọrụ karịa m na mgbe nwere. Kedu ihe na-eme n'ụwa?
Nke mbụ… Internet Explorer 7. Ọnọdụ menu ndị ọzọ na nzukọ nke ihuenyo ahụ masịrị m nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ihuenyo zuru oke dị egwu. Ma, n’ezie, mbido ahụ dị ukwuu.
Nke abụọ… Firefox 2. M ka budata ya. Ezigbo zippy! Ọ masịrị m. Anwalebeghị m spellcheck mana a na m anụ nke ahụ bụ nnukwu atụmatụ. Nke ahụ pụtara na enwere m ike ịwụfu Ogwe Ngwaọrụ Google.
Nke atọ… drumroll biko… na MacBook Pro. Enwetara m ọrụ na nwa nkita a ma enwere m obi ụtọ na 'ihe dị mma'. N'ezie, mgbe m zụtara ya, m ga-aga ịzụta obere laptọọpụ ọhụrụ dị mma ma maa mma. M ka na-eche na a ogologo anụ nyochaa na-arụ ọrụ… ma ihe na-erughị otu izu, M fọrọ nke nta n'ụzọ zuru ezu tọghatara.
M boro Ndekota na ya (WOW!) Ya mere, m nwere ike ịgba ọsọ XP mgbe m nwere n'otu ihuenyo (ma ọ bụ na windo) na OSX na nke ọzọ. Nke ahụ na-agbapụ m. Echeghị m na m ga-abụ onye Windows Cripple ruo ogologo oge. Ekwesịrị m ịgwa gị n'ile anya na mmetụta, OSX dịkarịsịrị elu n'ọdịdị, mmetụta na operability. Adịghị m Apple snob (mana), mana enwere m ike ịghọ otu. Echere m na oge mbụ m ga - emeghe ya na ala, m ga - abụ otu!
Ihe ụfọdụ anaghị m amasị banyere Mac? Na magnetik ike ụdọ dị jụụ niile, ma ndị ọzọ na njedebe eme nzuzu… nke ahụ bụ nnukwu ol 'clunky ike ọkọnọ. Ha makwara eriri ndọtị ahụ. Ọtụtụ imewe maka obere ụkwụ.
Ihe Ọjọọ 5 Na-egbu Ọnwụ nke Nchịkwa Ngwaahịa
Email 2.0 - Ngwa Richntanetị bara ọgaranya, Multimedia, akwụkwọ agbakwunyere?
Ọkt 25, 2006 na 6:53 AM
Akpa nwamba na nkịta na-ebikọ ọnụ ma ugbu a Doug na MAC? Ekwela ka ọ ghara ịdị!
Ihe ọchị, ụnyaahụ onye na-ese ihe nkiri anyị (MAC boy) na onye nduzi anyị nke Ọrụ (ntanetị (PC boy) ghọtara na ha bụ n'ezie ndụ na-e artomi nkà. A gbanwere koodu uwe ọfịs anyị (n'ikpeazụ) ka anyị ghara iyi uwe. N'ụbọchị mbụ nke iwu ọhụrụ ahụ, MAC boy bịara na-arụ ọrụ na-enweghị nkwekọ, mana nwata nwoke PC yi eriri tie agbanyeghị. Ha ghọrọ Apple azụmahịa.
Ọ bụrụ na ebe nchekwa na-eje ozi, Doug, ị ga-adị mkpa karịa na otu ụlọ. Ya mere, nke a na-ajụ ajụjụ, ọ ka mma inwe mmetụta dị mkpa, ma ọ bụ dị jụụ?